Iilogo zokuchwetheza: awona manqaku etypografi kunye neempawu zawo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 22/04/2022 13:11 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Ukuba sithetha malunga nesazisi senkampani okanye uyilo lophawu, siyaqonda ukuba iibrendi ziye zavela njani kwintengiso ngenxa yoyilo lwazo. Kuqheleke kakhulu ukubona iilogo zeentlobo ezahlukeneyo.
Kodwa ngakumbi, kufuneka sigxininise abo baye behla kwimbali ngenxa yokuchwetheza kwabo. Ukukhethwa kwe-typography efanelekileyo okanye esebenzayo yenza i-90% yempumelelo yesazisi kwicandelo loyilo.
Yiyo loo nto, kule posi, Sithetha malunga nokuba zinjani ezi ntlobo zelogos kwaye zeziphi iimpawu ezibonisayo. Kwakhona, ekupheleni kwesithuba siya kucebisa ezinye zezona zixhobo zibalaseleyo zokukwazi ukuyila eyakho.
1 Iilogo zokuchwetheza: yintoni na
1.1.1 Yenza kube lula
1.1.2 Yiba yintsusa kunye nobuchule
1.1.3 yenze ibaluleke
2 Iilogo ezilungileyo zokuchwetheza
Iilogo zokuchwetheza: yintoni na
Umthombo: UkuThengisa ngokuthe ngqo
Xa sithetha ngoyilo lokuchwetheza, sibhekisa kuyilo lophawu olugqitywe ngokupheleleyo ludidi olunye okanye ezininzi. Kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo lo mba kuba ukhetho olulungileyo lokuchwetheza lufanelekile kwimpumelelo yalo.
Ngokuqhelekileyo ziilogo ezibonakaliswe ngokukodwa ngobuncinci bazo kunye nesiseko esilula. Yiyo loo nto bephuma kwabanye kwaye bahlulwe ngokuyila kwabo. Ngezantsi, sikubonisa ezinye zeempawu eziphambili ekufuneka sizithathele ingqalelo xa uyila ilogo.
Ukulula kuhambelana nokusebenza kuyilo. Ngoko ke, kuhlale kucetyiswa ukuba wenze uyilo olulula ngokusemandleni. Yonke into enokuthi ingcolise umfanekiso we-brand yakho, kubalulekile ukuba siyazi indlela yokuyilungisa ngamaxesha onke kwaye ngale ndlela kuphela ezo zinto ezimele uphawu xa zizonke zihlala.
Ngamafutshane, zama ukufunda, ukuphanda kunye nokukhetha i-typography ekulula ukuyichonga, ukuyifunda kwaye imele, ngenxa yeemilo okanye ukubonakala kwayo, kodwa nje ukuba isebenza ngendlela yokunxibelelana.
Yiba yintsusa kunye nobuchule
Ubuchule bokuyila busisiseko kwaye bunesigqibo esikhulu ukuba sithetha ngoyilo oluqala ukusuka ekuqaleni. Nangona kunjalo, uphawu oluthathwa njengelokuqala, luphawu olungazange lubonwe ngaphambili kwaye ludibana neempawu zokuba yilogo eyodwa.
Inyaniso elula yokwazi ukuba i-brand yeyoqobo, iyibeka ngendlela efanelekileyo kwimarike. Ukongeza, kwi-psychology yomfanekiso, kuthiwa uphawu olungazange lubonwe ngaphambili lulula kakhulu ukukhumbula kunokuba sibona ngeso lengqondo imihla ngemihla.
Umsebenzi wokumaketha yinto enzima kakhulu kwaye inzima ukuba sithetha malunga nempumelelo ehlala iminyaka. Kodwa yonke into ineqhinga layo kwaye ngeli xesha iqhinga ngumzamo. Umyili owenza uphando kangangonyaka uya kufumana umphumo obhetele kunomyili owenze uphando kangangeenyanga ezintathu kuphela.
Yiyo loo nto iprojekthi nganye esiyenzayo ibalulekile, kwaye nayo, isiphumo esiza emva kwayo. Siyakucebisa ukuba ungazinzisi into yokuqala oyifumanayo kwaye uye phambili. Misela imida kunye nemingeni. Iya kuba yeyona nto ilungileyo kwimpumelelo yakho.
Iilogo ezilungileyo zokuchwetheza
Uphawu oludumileyo lweziselo ezithambileyo lujikeleze ihlabathi kwaye aluzange luthethe ngcono. Kwaye akubanga ngenxa yendlela imveliso yayo ithengiswe ngayo, ekwabalulekile ukuyigxininisa, kodwa nangenxa yokuba uphawu lwayo kunye noyilo olusetyenzisiweyo lwehlile kwimbali.
Ilogo yenziwe ngokuchwetheza eyaziwa ngokuba siscript okanye ngokubhala ngesandla.. Igcina inkangeleko engathandekiyo nangona iluphawu lwesiselo esithambileyo. Ukongeza, into ephinda iphawule ngumbala wayo obomvu. Inoluhlu lwayo lokuba, kunye ne-typography yayo, ibe yenye yezona mpawu zibalulekileyo kunye ezidliwayo kwimarike.
Ukuba sisuka kude necandelo lesiselo kwaye siqhubele phambili kwicandelo lokuhlela ngakumbi okanye kwihlabathi lefashoni yangoku, siyaqonda ukuba iVogue nayo yasebenzisa uyilo lokuchwetheza lohlobo lwayo. Iphephancwadi elidumileyo lefashoni liye lehla kwimbali kungekhona nje ngenxa yoyilo lweemagazini zayo, kodwa ngenxa yelogo yayo, ngenxa yedemu kunye nomfanekiso osemthethweni. I-typeface elula ebonisa bonke ubunewunewu kwaye iphawula ngaphambili nasemva kwishishini lefashoni.
I-Cadillac luphawu lwemoto oludweliswe njengenye yezona zinto zibalulekileyo eziphezulu. Uphawu lwayo lubonisa kwaye lubonisa zonke iimpawu ezinazo iimoto zayo: ubunewunewu, ubugcisa, umgangatho kunye nesixa esikhulu semali kwisithuthi ngasinye.. Le yindlela abagqibe ngayo ukuyila uphawu, kunye nohlobo olubhalwe ngesandla olubhalwe bukekela, lukwazile ukuqokelela ezinye zezona nkalo zimelwe kakhulu.
Ngokungathandabuzekiyo, ziyilo eziye zaphumelela kakhulu kwishishini leemoto, kwaye ngenxa yesi sizathu, ziye zafumana ukuqondwa kakuhle.
Enye yeebrendi okanye iilogo ezingasileli kolu luhlu yiYahoo. Isikhangeli se-intanethi esidumileyo samkelwa kwihlabathi jikelele kwiqonga layo elimangalisayo nelimele imibuzo. Kanye njengokuba iforum yakho ibinjalo, ngokunjalo uyilo lwelogo yakho.
Uyilo olulula, olujikelezileyo kunye ne-livelier typography. Kodwa uhlala ugcina iimpawu kwi-typography yayo. Umbala wayo obomvu ukhaphe i-typography yayo kakuhle kakhulu ngamaxesha onke, iyenza ibe yenye yezona mpawu zisebenzayo okanye uyilo, ngaphandle kwamathandabuzo.
Asikwazanga ukushiya ilog edumileyo yeDisney, uphawu olugcwele umlingo, ifantasy, oopopayi kunye nendawo yokubuyela ukuba yinkwenkwe okanye intombazana kwakhona. Ngaphandle kwamathandabuzo, uyilo lophawu lwayo luhambelana nomfanekiso uWalt Disney wayefuna ukunika uluntu.
Nanini na xa kuvela uphawu oludumileyo kwizikrini, siyancuma sisazi ukuba ibiyinxalenye yobuntwana bethu iminyaka emininzi. Yenye yeempawu ezenza ukuba ibe lolona yilo lubalaseleyo kushishino lwefilimu, ixesha layo elide. Ngubani ongayi kufuna ukuba ngumntwana kwakhona?
Asikwazanga ukusishiya ngasemva eso sixhobo ukuze siqale uluhlu. Sesinye sezixhobo okanye isoftware eyinxalenye yeAdobe. Kwaye ayikuko ukuba sisixhobo seenkwenkwezi, kodwa yeyona ndlela ilungileyo yokuyila iibrendi zakho. Inoluhlu lwezixhobo ezenza ukuba ibe yinto engcono kakhulu.
Ngokukwazi ukusebenza kunye ne-vectors, unokuyila kuzo zonke iindlela kunye nayo yonke into oyifunayo. Ukongeza, sele imiselwe ngokungagqibekanga ngoluhlu lweefonti okanye iipakethi onokuthi ngazo uqalise ukusebenza okanye ukuqikelela uyilo lwakho.
Ngokuqinisekileyo sele uvile ngeCanva. Yenye yeenketho zasimahla zabayili abaqalayo kunye nabaqulunqi. Ineetemplates ezahlukeneyo apho unokusebenza kuyilo lwakho ngendlela ekhululekile ngakumbi.
Ingxaki kuphela kukuba xa usebenza nezinye iitemplates zabo, sinokufumana iibrendi esele zibhalisiwe kwaye zifana okanye zifana ncam neyethu, ethatha loo ngongoma yokuqala kunye nobuchule kwinkqubo yoyilo. Unokwenza ezinye izinto zokuhlela ezinje ngamakhadi oshishino njl.njl.
I-Placeit sesinye isixhobo esiye saluncedo kakhulu ngexesha lenkqubo yoyilo lwelogo. Liqonga elikwi-intanethi onokuthi ngalo ube nokufikelela kungekuphela nje kuyilo lwelogo, kodwa nakuyilo lwezinye iimockups, uyilo lwe-intanethi lomxholo othile okanye iinethiwekhi zentlalo, okanye nokuhlelwa kwevidiyo.
Sesinye sezona zixhobo zipheleleyo eziya kuba luncedo olukhulu kuwe ukuba uqalise. Ukongeza, ikwanayo nenxalenye yasimahla okanye ye-beta, okuthetha ukuba ukufikelela lula kunye nokusimahla apho unokwenza uyilo lwakho ngokukhawuleza.
Ayilona khetho lufanelekileyo lokuyila ilogo, kodwa ikwanako ukwenza njalo. Nangona singasebenzi ngee-vectors, eyenza ukuba umsebenzi wesazisi ube nzima kakhulu, kuyenzeka ukuba zenze kwaye uziguqulele kwi-PNG ukuzibandakanya ngale ndlela kwezinye iimali zenzala.
Yenye yesoftware okanye izicelo eziyinxalenye ye-Adobe, kwaye, nangona inengxaki kuyilo lwesazisi, nayo inokukhethwa kwayo ngokwezixhobo zayo. Ekubeni inezixhobo zokuhlela ezahlukeneyo kunye neebrashi.
Bayanda abaqulunqi babheja ngolu hlobo loyilo lweelogo zabo. Iilogo zokuchwetheza ziye zehla kwimbali malunga nokuba zinjani iifonti zazo. Into abambalwa abangayaziyo kukuba ifonti elula inokudluliselwa kuyilo lwethu okanye ezingqondweni zethu.
Ngenxa yesi sizathu, ukuyila kwakhona kuyinkalo yengqondo yokuba, ukuba siyakwazi ukufikelela kubaphulaphuli esijolise kubo, sinokuba yimpumelelo epheleleyo, okanye ngokuchaseneyo, intlekele epheleleyo. Ngokufutshane, sinethemba lokuba ufunde ngakumbi malunga nolu hlobo lweelogo kunye noyilo, kwaye ube nobuganga bokuyila eyakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iilogo zokuchwetheza